August 26, 2010 by chowutyee နိုင်လွန်ပုဇွန် (Shrimp_Dumplings)
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 44 Comments	44 Responses
အချိန်ရရင်တော့ လုပ်ကြည့်မယ်။ ကြိုက်တယ်။ ဒင်ဆန်း စားရင် အဲဒါ အမြဲမှာတယ်။ ဒီမှာကျတော့ ဈေးကြီးတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားမှ တွက်ခြေကိုက်မယ်.. ဟီးးး😀
ဟားဟား… ဟုတ်ပ ၀ယ်စားရတာ ဈေးကြီးတယ်နော်..🙂
m ရေ CityMart ဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်.. plz try it!!🙂
အရမ်းစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ အာမထိ ရှာမထိ မျိုနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်😛
Warning to Fatty!!! Dont’ make food for you anymore… on August 26, 2010 at 9:03 am | Reply cho
wow that one is yummy but seem quite difficult to do…ko lote kyae ma bae eat ya top mal hee😉
ဟားဟား.. ကိုယ်ရန်ကုန်လာရင် နေ့တိုင်း နိုင်လွန်ပုဇွန်ပဲ ကျွေးတော့မယ်…. ဟီးဟီး🙂
Many Thanks Ma Moe Moe Hlaing!!!🙂
Jewel ရေ wheat flour ဖြစ်ရင် ရပါပြီ ဘယ်အမျိုးစားဖြစ်ဖြစ်ပါ…😛
မရေ ဒီဘလောက်မှာ email subscription လုပ်ထားရင် ဟင်းသစ်တင်တိုင်း မဆီ အီးမေးပို့ပေးပါတယ်..🙂